Hery - Tsiky dia ampy | Jolay 2016 |
Hitsangana indray ry Rainisoazanatasy
2016-07-08 @ 18:19 in Politika
Lany teny amin'ny Antenimieram-pirenena alina hono ny Lalàna mifehy ny fifandraisana. Raha fintinina dia sivana sy famehezam-bava ho an'ireo mpikirakira vaovao sy ho an'ny rehetra no ao anatiny. Araka ny vaovao farany dia nitsipaka izany ny RSF sy ny UPF. Tsy vaovao intsony nefa izany ho an'ireo niaina tany amin'ny taona 80 tany. Imbetsaka no nahita gazety nisy faritra na pejy fotsy tanteraka satria nandalo sivana tamin'ny ora farany. Fa ny nahay azy dia ny Gazety Lakroa izay nisy an'i mompera Remy Ralibera sy ny ekipany. Hainy ny nihoatra ny sivana ka tafita foana ny hafatra nefa sarotra dia sarotra ny nanakana ny Gazety Lakroa hivoaka.
Tamin'izany no nahenoako andry Rainisoazanatasy.
Rainisoazanatasy dia vahoaka ao amin'ny RBDMNK (raha tadidiko) izay miaritra fijaliana sy fahoriana. Misy itovizany betsaka amin'ny an'ny Malagasy ny fiainany, fa tsy Malagasy ry zareo :-) Ka dia ny fiainan'ny Rainisoazanatasy sy ny RBDMNK no voatsikera sy toroana hevitra tao.
Izany no fomba iray nataon’ireo mpanao gazety tao amin’ny Gazety Lakroa nitsikeran’izy ireo ny fitondrana izay tsy azo notsikeraina intsony tamin’izany fotoana izany. Izany sisa no nahafahany nampita ny zava-misy ho an’ireo mpamaky. Isaky ny misy zavatra mitranga eo amin’ny firenena, na misy kabarin’ny mpitondra mila tsikeraina, dia ny mpitondran’ny Rainisoazanatasy sy ry Rainisoazanatasy no nahazo fananarana sy torohevitra.
Tamin'ny farany moa dia hoy foana ny lahatsoratra hoe "Hafa ihany ho'aho isika Malagasy e."
Koa raha izao no mitohy dia hitsangana indray ry Rainisoazanatasy sy ny fianakaviany hiseho gazety.